Mofon’aina – TALATA 15 MAI 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 15 MAI 2018
Fanahy Masina, Fankatoavana
8 Fa lazaiko aminareo: Na zovy na zovy no manaiky Ahy eo anatrehan’ ny olona, dia heken’ ny Zanak’ olona kosa izy eo anatrehan’ ny anjelin’ Andriamanitra;9 Fa izay mandà Ahy eo anatrehan’ ny olona, dia holavina kosa izy eo anatrehan’ ny anjelin’ Andriamanitra.10 Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak’ olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka.11 Ary raha mitondra anareo ho ao amin’ ny synagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo, na izay holazainareo;12 fa ny Fanahy Masina no hampianatra anareo amin’ izany ora izany izay mety holazainareo.
LIOKA 12 :8-12
NY FANEKENA AN’I JESOA KRISTY
1-Ambarao eo anatrehan’ny olona
Ilaina ny fahasahiana hijoro sy hanambara ankarihary ny fanekena an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny tena.Voasoratra fa « raha manaiky an’i Jesoa ho Tompo amin’ny vavanao ianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty , dia hovonjena ianao » (Rom 10 :10). Araka izany dia zava-dehibe ny fanekena atao eo anatrehan’ Andriamanitra sy ny fiangonana. Ilàna fahasahiana ny fijoroana vavolombelona ; Tsy mifidy toerana ,tsy mifidy fotoana. Na eo imason’ny fahavalo sy ny hafa finoana aza dia ilaina ny fijoroana amin’izay inoana. Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika (2 Tim 1 :8)
2-Aseho amin’ny alalan’ny fitondrantena isanandro
Na amin’ny fiteny , na amin’ny asa, fihetsika , fikasana, ny làlan-kizorana dia samy hanehoana ny fanekena an’i Jesoa Kristy : any am-piasana , any am-pianarana, eny an-tanimboly , eny am-pivarotana , eny amin’ny fiaraha-monina amin’ny fiainana andavanandro dia samy ijoroana ho mpanompon’i Kristy , araka ny voasoratra hoe : « aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino ianao amin’ny fiteny , amin’ny fitondrantena , amin’ny fitiavana, amin’ny finoana, amin’ny fahadiovana » (1 Tim 4 :12)
Oviana ary taiza no nanekenao an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao ?